त्यसपछि उनि आफै यो संसारबाट सधैका लागि अस्ताए…. – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/त्यसपछि उनि आफै यो संसारबाट सधैका लागि अस्ताए….
एजेन्सी । भारतमा बिहीबार कोरोना संक्रमणका कारण एक डाक्टरको निधन भएको छ । भारतको मध्यप्रदेश राज्यका ६२ वर्षीय डाक्टर शत्रुधन पञ्जवानीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको हो । मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहानले डा.पञ्जवानीको निधन को पुष्टि गरेका छन् । स्वस्थ्यमन्त्री आश्विनी चौबे र मुख्यमन्त्री चौहानले डा.पञ्जवानीको निधन प्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्दाञ्जली अपर्ण गरेका छन् ।
डा.पञ्जवानीमा केही दिनअघि मात्र कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसलगत्तै उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको जनाइएको छ । डा.पञ्जवानीको निधन लगत्तै मध्यप्रदेशमा थप सतर्कता अप्नाइएको छ भने क्रियाशील डाक्टर र नर्सको सुरक्षाका लागि थप सावधानी अप्नाइएको बीबीसीले जनाएको छ ।
भारतमा बिहीबार पनि कारोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरु थपिएका छन् । गएको १२ घन्टायता यहाँ ५४७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । शुक्रबार विहानको तथ्यांकअनुसार भारतमा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या ६ हजार नाघेको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यहाँ शुक्रबार बिहानसम्म ६ हजार ४१२ जनामा यसको संक्रमण भएको भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकरी दिएको छ ।
पछिल्ला केही दिनमा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । भारतमा शुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी संक्रमित महाराष्ट्र राज्यमा देखिएका छन् । शुक्रबार पनि यो क्रम जारी नै छ । भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकरी दिएको जानकारीअनुसार यहाँ गएको १२ घन्टामा निधन हुनेको संख्या पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पाइएको छ ।
गएको १२ घन्टामा यहाँ ३० जनाको ज्यान गएको सो मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या १९९ पुगेको भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै भारतमा कोरोनाबाट एक डाक्टरको ज्यान गएको छ । डा. शत्रुघ्न पञ्जवानीमा केही दिनअघि मात्रै कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो।
कोरोनाको उपचारमा संलग्न उक्त डाक्टरको बिहिबार मध्य प्रदेशको इन्दौरमा निधन भएको भारतिय मिडियाले जनाएको छ । भारतमा यो पहिलो घटना हो । उक्त डाक्टरमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । भारतका अरु राज्यहरुको तुलनामा महाराष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको समाचारमा जनाइएको छ ।डाक्टरको निधन पछि पूरै प्रदेश तरंगित भएको छ।
यसरी भारतमा केही दिनयता बढ्दो रुपमा यसका संक्रमितहरु देखिएका पनि बताइएको छ । यहाँका ५०४ जना संक्रमित भने उपचार पछि निको भएर घर फर्र्किएका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारीअनुसार यहाँ ५ हजार ७०९ जना कोरोनाका संक्रमित विरामी अस्पतालमा छन् । भारतमा यसरी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ संक्रमितहरु थपिँदै जानु चुनौतीपूर्ण भएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।